Iceland na-egwupu olulu mmiri kacha mie ala | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Iceland na-egwu ala miri emi nke ụwa n’ụzọ miri emi dị n’ime ugwu ọkụ
Manuel Ramirez | | Ike ikuku, Noticias
Iceland na-egwu ala ahụ ihe omimi miri emi na mbara ala n’etiti ugwu na-agbọpụ ọkụ nke nwere omimi nke kilomita 5 iji jiri ume ya na-agbanwe agbanwe.
Ma ọ bụ na oke nrụgide na okpomoku dị na omimi ndị ahụ nwere ike ịnweta ọkụ eletrik 30 ruo 50 MW site na otu olulu mmiri dị egwu. Iceland bụ onye ndu uwa na iji ike ikuku mee ihe ma na-ewepụta ihe ruru pesenti 26 nke ọkụ eletrik ya site na isi ala.
The arụnyere ọgbọ ike nke geothermal ike osisi bụ a ngụkọta nke 665 MW na 2013 na mmepụta ya bụ 5.245 GWh.
Typicaldị nke ọma nke kilomita 2,5 nke ọma na mpaghara Icelandic bụ ike ya dịka 5 MW. Ọkà mmụta sayensị na-atụ anya a mmụba site na iri na ike dị egwu nke olulu mmiri mgbe ọ na-egwu ala n'ime ala. Na omimi nke kilomita 5, oke nrụgide na okpomoku karịrị 500 Celsius ga-emepụta "anwụrụ ọkụ" nke ga-eme ka arụmọrụ nke turbine dịkwuo elu.
A na-egwukọta otu ụlọ ọrụ Statoil na Iceland Deep Drilling Project (IDDP), olulu mmiri kacha mma n'ụwa. na mpaghara mmiri Reykjanes, ebe ugwu ọgbụgba ọkụ gbawara ikpeazụ ya afọ 700 gara aga.
Un yiri nnwale a afọ isii gara aga biri na ọdachi, na ihe eji egwu mmiri na-emetụ magma na omimi nke kilomita 2,1, na-ebibi eriri igwe. Gesgeir margeirsson, onye isi oche nke ọrụ nne na nna HS Orka, kwuru, sị:
Enweghị nkwa ọ bụla ihe na-aga nke ọma, na ogbu mmiri ndị dị otú ahụ ihe niile nwere ike ịghọ ọdachi n'ime sekọnd ole na ole. Ihe a niile nwere ike ịnwe njedebe a na-atụghị anya ya, n'ihi na n'ihi ihe ụfọdụ enweghị ike ịgbanye ya n'ụzọ miri emi. Anyị anaghị atụ anya imetụ magma, mana anyị ga-egwu mmiri na nkume dị ọkụ. Na site na nkume na-ekpo ọkụ, anyị pụtara 400 Celsius Celsius Celsius.
Maka afọ 7 sochirinụ atụmatụ IDDP bụ luo ma nwalee usoro olulu mmiri nke ahụ ga-abanye na mpaghara ndị na-enweghị atụ kwenyere na ha dị n'okpuru mpaghara atọ dị egwu nke Iceland.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike ikuku » Iceland na-egwu ala miri emi nke ụwa n’ụzọ miri emi dị n’ime ugwu ọkụ
Ike imeghari ohuru maka ikuku ikuku: ike ikuku
Oke osimiri Seahorse na-agbadata na Mediterenian